Kuyinto kujwayelekile ukubona - ihholo ekhonsathini, ku virtuoso esiteji violin, ihholo ezigcwele eziningi abathandi bomculo, qaphelani imisindvo othakazelisayo. Ngaphandle ngokuthinta amakhono somculi, konke okwenzekayo sezivuma ngenxa umphumela resonance acoustic. Ngakho uyini impendulo?
Ngesikhathi kukhulunywa elithi ngokushesha ukukhunjuzwa indaba ubudala mayelana nokubhujiswa inkampani ibhuloho amasosha belungele ukuhamba. Amasosha, wanyukela ke, wayelokhu eya emasha umlenze. Ngenxa yalokho, leli bhuloho ngiyaquleka.
Noma isithombe ezivamile - ingane ku jika. Futhi umuntu oseduze, unyakazisa kubo. amabutho Minor isicelo ngesikhathi esifanele, ingafinyelela ezinkulu oscillation amplitude futhi ukuletha kakhulu ingane.
Ngaphandle kokuya incazelo zezibalo lomkhuba okwenzekayo, zama qualitatively baqonde ukuthi resonance. physics ebhukwinitifundvo anquma ukuthi lokhu umphumela njengoba okwandisa amplitude oscillation kohlelo lapho imvamisa umthelela zangaphandle kanye nokuvama zemvelo. A nakuchazwa. Imvamisa oscillation - isibalo kunyakaza ngomzuzwana.
Yebo, akulona kucace ngokuphelele, amagama zonke owayebonakala emkhulu ajwayelekile - resonance physics, imvamisa zemvelo. Kusho ukuthini?
Ukuze kube lula masikhumbule esinye isibonelo - phakathi izigxobo ezimbili (akube ngababili amabhange kokusakaza) ibhodi eside ububanzi, kungcono kancane ongagxilile, kokuntengantenga, kodwa ubukeka ethembekile. Hamba isifudlana njengomfula, uvuke ebhodini uhambe. Kodwa nakhu yini amashwa. Ngasiphi isivinini ethile, noma ngamanye amazwi, izikhathi izinyathelo, ibhodi iqala uma ekhankasela ukudla, basabisa nangokuthi yokulahla walker. Kulokhu futhi kwenziwe izimo resonance - imvamisa oscillation ngokwayo amabhodi kuvumelana imvamisa izinyathelo abahamba ngezinyawo. Ngenxa yalokho, lo amplitude vibration is kakhulu anda, umphumela walo okhulisa kungaba ezingalindelekile ukwelashwa amanzi.
into enjalo isakazeke kakhulu emikhakheni ehlukahlukene. Ngo-electronics, imithi, umculo, lapho ukuqala incazelo nomphumela resonance. Lesi simo esiyingqayizivele sibangelwa Ngokuvamile kuyasiza, ukuvumela, isibonelo, ukukhulisa a isignali enganamandla. Umsindo izintambo violin iyakhula umzimba wakhe, osebenza njengokuvimbelayo elalinembobo, okungukuthi, amplifier ku imvamisa othize. Futhi umsindo violin ngokwayo okuthuthukiswa ezinhle Igumbi umsindo.
Bambalwa nezinye isicelo resonance - the okhulisa isignali yomsakazo. Nalapha futhi, kungcono elula. Yiqinisekise umsakazo isignali wokuzunguzwa antenna, futhi ukusuka lapho wawuqala ingena circuit ekhethekile yokufaka, ukushintsha kwemigomo ezingasetshenziswa ukuthuthukisa oyifunayo isignali imvamisa. Esikwenzayo manje ukuthi sihlanganise lapho siphendukela inkinobho umamukeli Tuning ukuthola isiteshi somsakazo oyifunayo kithi. Ngenxa ozinikele isignali yomsakazo okhulisa enjalo buyaqina futhi wamukela kahle owamukelayo.
kuba impendulo esobala yombuzo ezibonelweni ezingenhla ukuthi resonance ezinjalo. Lokhu imizamo ukwanda jikelele sizila amakhono ukuvumelanisa kohlelo futhi isenzo zangaphandle. Njengoba isibonelo sokugcina - ngomzamo ukuphuma enenhlabathi emotweni "jika". Umshayeli iqala ukuba yanjalo ukuhambisa umshini phambili noma emuva. Emuva ngaleso sikhathi ukusheshisa phambili, uma ehluleka futhi kuyashesha, kodwa emuva nokudlulisa futhi. Nale ndlela, amandla injini yengezwe inertia ukunyakaza futhi ezimweni eziningi evumela ukuba unqobe endaweni enzima.
Ngisho imali kulezi zibonelo nesizotha kwanele ukuba baqonde indlela kabanzi lomkhuba resonance ubuciko nokuphila kwansuku zonke.
Kulesi impahla, sibe siphendula umbuzo yini resonance. Sibonelo sa-okuwukubonakaliswa resonance imihlola emikhakheni ehlukahlukene ubuchwepheshe namasiko.
"Axial Ubudala" noKarla Yaspersa
Uyini zamagama neoclassical
Womuntu isitho izinhlelo
Wotshani Homemade. Homemade wotshani rotary
Hamadryad - ubani lo? kwendawo ukuziphatha, futhi izitha igunya
Biography Tatyany Pelttser - actress omkhulu Soviet
Isiqophi kusukela snoring: nokubuyekeza amakhasimende. Ingabe clip snoring?
Ring Alexandrite: incazelo, izithombe, imithetho Ukukhetha
Indlela yokwenza incazelo efanele?
Angazi ukuthi yini okufanele uyenze uma ungenawo yiya engxenyeni ethi "Imininingwane"? Khona-ke ukufunda isinyathelo!
Yini i-alpha-amylase egazini ethi?
Iluphi ugu lolunikeza iGulf of Finland ukuzijabulisa? Amabhishi angcono kakhulu ogwini laseGulf of Finland: ibalazwe, izithombe kanye nokubuyekezwa
Imisebenzi yezezezimali nezomnotho ngokubambisana nobulungu be-WTO